Weriye horey uga tirsanaa News of the world oo maydkiisa laga helay gurigiisa – SBC
Weriye horey uga tirsanaa News of the world oo maydkiisa laga helay gurigiisa
Posted by editor on Julaay 19, 2011 Comments
London:- Shin Horry oo horey uga mid ahaa wariyaashii wargeyskii caanka ahaa ee News of the World ee albaabada layskugu dhuftey ayaa maydkiisa laga helay gurigiisa oo ku yaala deegaanka lagu magcaabo Watford ee dalka Britain.
Mr. Horry ayaa ahaa weriyihii ugu horeeyey ee ka diga in howlaha uu sameenayo wargeyska News of the world ee ku aadan dhageysiga Telefoono iyo akhrishada email ay yihiin kuwo meel sare maraya kahor inta booliska Britain aysan ogaan.
Booliska deegaanka Hartford Share ayaa sheegay in laga helay maydka weriyaha guri ku yaala wadada Angel Road.
Dhanka kale kaaliyaha madaxa booliska caasimadda Britain ee London ninka lagu magcaabo John Yates ayaa iscasilay kadib markii ay sii korortay cadaadiska ku aadan doorka uu kulahaa fadeexadii dhegeysiga taleefoonada.
Sidoo kale waxaa arrintaan isku casilay madaxii ciidamada caasimadda Britain Al-ser Pall Stevenson sababo la xiriira dhageysiga taleefoonada.
Taliyaha booliska ayaa ahaa taliyihii ugu sareeyey ciidanka booliska Britain waana sarkaalka ugu sareeya booliska Britain martabaad ahaan kaasi oo cambaareen loogu soo jeediyey magacaabidii uu u magacaabay Nil iyo Ales la taliye ahaan.
Madaxa booliska ayaa sheegay in uu gaarsiiyey qasriga Buckingham iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo duqa magaalada London Boris Johnson qaraarkii istiqaaladiisa.